SIDA LOO SAMEEYO DAYACTIRADA CAWSKA - MISHIINADA GAARKA AH
Dib-u-hagaajinta ciribtirka: samafalka ugu weyn ee dhibaatooyinka iyo ka-saarista
Milkiilayaasha cawska iyo cagaarka leh ee isticmaala cawska cawska ayaa laga yaabaa inay ku dhibaan marka ay shaqaynayaan. Qodobkani waxaan kuu sheegi doonaa sida loo hagaajiyo cawska gaaska cawska ee gacmahaagaiyo sidoo kale waxaad ka ogaan doontaa sababaha caadiga ah ee burburka qalabkan.
Qaababka qaabdhismeedka qashinka cowska
Inta badan miro-dhaliyeyaasha waxaa lagu riixaa adigoo riixaya, laakiin sidoo kale waxaa jira noocyo lagu xakameyn karo isticmaalka mashiinka istiraashka. Qalab gaar ah oo qalab ah ayaa loogu talagalay shaqooyin kala duwan. Kuwa yaryar waxay la shaqeeyaan qaybta dhexe ee caadiga ah, iyo mashiinnada waawayn ee leh koontaroolka isteerinka waxaa loo isticmaalaa qaansooyinka waaweyn.
Laakiin qalabka oo dhan waxay leeyihiin qaab isku mid ah. Aan bilaabno kiiska. Makhaayadaha gaasta waxaad leedahay aluminium iyo alaab bir ah.
Iyadoo caawimaadda cawska ah ee aad dooratid inaad bixiso, waxaad sidoo kale xajin kartaa cawska.
Aluminium Waxaa loo isticmaalaa in badan oo badan, sababtoo ah sida jirku waa mid daba-dheer, miisaan badan oo u adkaysta korantada. Noocyada birta waxaa ku jira makiinada xoog leh oo culus.
Electric Lawn Mower gaasku waa mid fudud oo jidhkoodu ka samaysan yahay bacda ABS. Waxaa loo isticmaalaa in lagu abuuro bumpers car. Muraayadaha cawsku waa inay ahaadaan kuwo ballaaran oo dhexdhexaad ah, si ay si fudud uga gudubto dhaqdhaqaaqa. Waxay sidoo kale abuuraan cadaadis yar dhulka oo ha ku dhaawacin cawska. Rugaha ayaa bixin doona kalsooni sarreeya iyo mudnaanta.
Warshadaha badan waxay sameeyaan labada taakule ee hore. Tani waxay u ogolaaneysaa maneuverestin kordhaysa. Muraayadaha hore waxay soo jeedinayaan qulqulin, sababtuna waxay tahay inaadan u baahnayn inaad kor u qaaddo makaraalka si aad u bedesho jihada. Aan ka hadalno mindiyaha. Dhammaantood, sida caadiga ah, waa kuwo isbedel ah waxayna ku yaalaan mashiinka shaqada. Dhexdhexaadiyaha mindiyaha ayaa go'aamiya balaarinta balaariyaha.
Rootiga ayaa sameeya kadib hawlaha:
Masarooyinka taageerta meel fog oo dhulka hoostiisa ah;
si dhakhso ah u dhaqaajiya iyo cawska;
wuxuu loola shaqeeyaa taageere ahaan. Duufaanta hawada ee ka soo jeeda qoorta ayaa caleemaha jarjaray cawska.
Dhamaan mindiyada waxaa laga sameeyey bir tayo sare leh.
Collector - Tani waa boorso weyn ama sanduuq caag ah oo leh meelo hawada ah. Si sahal ah ayaa loo saaraa, waana la tuurayaa. Cawsiyaal badani ma gooyaan cawska, laakiin waxay ku shiidi karaan bur. Nidaamkan waxaa loo yaqaan 'mulching'. Xaaladdan oo kale, ha u isticmaalin caleemaha, sida cagaarka ka dib qashin qubka ayaa u adeegi doona bacriminta.
Waa muhiim! Markaad la shaqeyneyso cawska cawska, raac tilmaamaha badbaadada.
Sababaha ugu weyn ee dhibaatooyinka cakiran
Marka xigta, waxaan tixgelineynaa sababaha ugu waaweyn ee cutubkan iyo noocyada u dhigma ee dayactirrada dayactirka.
Iskudhin iyo burburinta shaqada
Haddii aad maqashid xayawaan iyo riwaayad gudaha gudaha qashin-qubka, tani macnaheedu waa in gawaarida la furo. Xul kale oo loogu talagalay sanqadhaha maqnaashaha waa jir diirran oo go'an. Dhammaan tan waxa la hagaajin karaa. Iska hubi xiriir kasta oo wax lagu xiro ama, haddii uu jiro ciyaar aan la aqbali karin, adkee xidhmooyinka furfuran.
Gariir aad u daran markaad shaqaynayso
Jebinta kale ee ugu caansan waa xoog leh oo xoog leh iyo dhaqdhaqaaq aan la xakameynin inta lagu jiro shaqada. Dhibaatadu waa waxyeelo mindhicir baraf ah ama daciifinta nidaamka jarista ee mashiinka mower-ka.
Xaaladdan, waxaad si adag u adkeyn kartaa bolxadaha la furay ama beddela mindiyaha burburay, haddii aad dareento waxyaabo jaban.
Ma taqaanaa? Cawskii ugu horreeyey ee cawska ayaa UK ka soo muuqday 1830-kii.
Iskusheynta cawska markaad quutaneyso
Haddii aad maqashid codka foorida leh marka mashiinka korontada uu shaqeynayo, dhibaatadu waxay ku dhex jirtaa walax shisheeye. Marka la eego fiidiyowga ku jira aeratorka ayaa xiran. Si aad u xalliso dhibaatadan, kaliya iskuday filimka iyo ka saar shayga aan loo baahnayn.
Lawn Mower wuxuu cawska ku yar yahay
Haddii aad aragto in marka cawska laga jarayo, cawsku wuxuu ka baxayaa cagaarka dambe - tani macnaheedu waa mindhiciradu waa la jiiday. Waxay ku filan tahay in la xoqdo mindiyo la tuuro ama iibsato kuwa cusub.
Mishiinka wuxuu u shaqeynayaa si kala duwan ama mishiinku kama soo bilaabo
Haddii mashiinka wax lagu shaqeeyo uu si kala duwan u shaqeynayo, tani macnaheedu waa in suunka baabuurtu uu gashado oo uu u baahan yahay in la beddelo. Haddii lagu jiro kormeerka cutubka waxaad ogaaneysaa in fiilaha xirmooyinka la fidiyo - u habee. Miyuu caajisku bilaabayaa? Qaybta adeegso xarun adeeg oo dayactir tayo leh. Dhibaatadu waxay noqon kartaa shumacyada ama samaynta shidaalka. Kiisaska noocan oo kale ah, beddel fudud oo ah fiilo ku dhejisan ama shidaal lagu shubo gaas ayaa kaa caawin doona.
Sidee loo dheereeyaa nolosha ubucda cawska ee waddanka: Talooyin ku saabsan daryeelka
Si aan loo dayactirin mishiinka ama walxaha kale ee cawska cawska ah, sameynta baaritaan farsamo oo joogto ah xilliga jiilaalka. Waxaad ka heli doontaa talooyinka dhabta ah ee buugga hawlgalka asalka ah.
Waa muhiim! Samee kormeer farsamo, ha filanin in cutubkii waxyeeloobay uu shaqeyn doono guga soo socda.
Xaqiiji inaad ku dhegto cawska. Nadiifi nadiifi, maaddaama ay tani keeni karto dunta. Markaad qallajiso cawska qalalan maahan mid aad u adag. Laakiin haddii cagaarka qoyan yahay, markaa waxaa lagu nadiifin karaa tuubo ama tuubbo biyo ah.
Mashiin nadiif ah. Waxay leedahay qaboojiye hawo si markaa qaboojinta qaboojinta ay u shaqeeyaan si fiicanna ha u kululeyn, nadiifi adigoo burush jilicsan. Isbeddel saliida. Xaaladdan, mashiinka qaanuunku waa in uu ahaado mid diirran sidaa darteed saliidda haray si fudud ayaa loo mari karaa. Markaad saliid ku shubayso, hubi heerkeeda. Si taxaddar leh u hubi in aan wax wasakh ah galin inta lagu guda jiro.
Dhamaadka xilli kasta waxaan ku talinaynaa bedel shaaha hawada mowers. Tan iyo intii ay shaqadu socoto boodhku wuxuu ku yaallaa. Waqtigaan, waxaad ku hubin kartaa bareeska dhalada. Haddii aad aragto in uu jiro wax yar oo ka baxsan shumaca, ubaxyada cad ama saliida hadhaaga, ka dibna waxay noqon doontaa mid kugu filan inaad nadiifiso ama ku beddesho mid cusub. Dhibaatooyinka kale, waxay u fiicantahay inaad bedesho faashada muraayadda isla markiiba.
Dhamaadka xilli ciyaareedka ayaan sidoo kale ku talinaynaa ka shaqee dhammaan bamka qashinka ku jiramowing lawn mowers ka hor inta aadan mashiinka dhigin kaydinta jiilaalka.
Ma taqaanaa? Waxaa jira jinsiyad cawska cawska ee UK.
Ugu danbeyn, waxaan jeclaan lahaa in aan sheego taas cawska cawska - qalab gaar ah oo ku haboon daryeelkaaga ayaa wakhti dheer kuu adeegi doona. Raac talooyinkeena si aan u sii wado cutubka.